Biyyoonni Khaliij al-Arab waliigaltee "Tumsaa fi Tasgabbii" jechuun moggaasan mallatteessan - NuuralHudaa
Korrii idilee Biyyoota Galoo Galaana Arabiyaa (Khaliij al-Arab) Kibxata har’aa Sa’uudii magaalaa al-Ulaa jedhamtu keessatti kan jalqabame yoo tahu, hogganaan Qaxar Sheikh Tamiim Bin Hamad Al-Saanii waggaa sadi booda walgahicha irratti hirmaataa jira. Korri bara kanaa waldhabbii masri dabalatee biyyoota gamtichaa sadihii fi Qaxar jidduu ture goolabuu irratti xiyyeefate. Haaluma kanaan hoggantoonni biyyoota Khaliijaa jahanii walgahii guyyaa jalqabaa booda, wixinee waliigaltee “”Tumsaa fi Tasgabbii” jechuun moggaasan mallatteessanii jiru.
Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan waliigalticha ilaalchisee haasaya godheen “walii galteen Al-Ulaa kan ifaajee cimaa fi yeroo dheeraa booda irra gahame kun, Tumsaa fi Tasgabbii biyyoota Khaliijaa, biyyoota Arabaa akkasumas biyyoota Islaamaa kan mirkaneessu” jedhe. Mohammad Bin Salmaan Kuweeyt fi Ameerikaas, waliigalteen kun akka milkaahuuf carraaqqii godhaniif galateeffatee jira.
Bin Salmaan haasaya isaa kana keessatti “Naannawa keenna keessatti nagayaa fi tasgabbii mirkaneessuudhaaf gamtaa keenna cimsuun yeroo kamiyyuu caalaa nu barbaachisa; Keessumattuu balaa sagantaan Niwkilarii fi Balastikii Iiraan dhaqqabsiisuu malu, gamtaan qolachuutu nurraa eegama” jedhe.
Guutuun qabxiilee walii galtee kanaa hanga ammaatti kan hin beekamin tahus, Sa’uudiin halkan Wixata kaleessaa irraa jalqabee uggura Lafoo, Qilleensarraa fi Galaana irraan waggoota Sadii oliif Qaxar irra keettee turte kaasuun akkuma ibsameen, lammiileen naannichaa gammachuu isaanitti dhagayame ibsataa turan.
finfinnee show says:
July 30, 2021 sa;aa 5:43 pm Update tahe